एमाले-माओवादी सीट बाँडफाँडः कुन प्रदेशमा कति ? – Vision Khabar
एमाले-माओवादी सीट बाँडफाँडः कुन प्रदेशमा कति ?
। २३ आश्विन २०७४, सोमबार १६:३९ मा प्रकाशित
२३ असोज, काठमाडौं । आशन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डाका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रवीच कुन जिल्लामा कति सीट लिने भन्ने रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
चुनावपछि पार्टी एकताकै घोषणा गर्ने भन्दै कार्यदल बनाएका एमाले-माओवादी नेताहरुवीच यतिबेला १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी भागवण्डा गर्ने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म चलिरहेको छलफलका आधारमा ७ वटै प्रदेशमा माओवादी र एमालेवीच ‘बार्गे्निङ’ चलिरहेको छ । यो सहमति अन्तिम नभए पनि सूत्रहरुले दिएको जानकारी अनुसार सीटको बाँडफाँड सम्बन्धी बहस यस्तो छः
प्रदेश नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभातर्फ माओवादीले बढीमा ५ सीट पाउने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि उसले ८ सीटसम्म दाबी गरेको छ । प्रदेश १ का २८ सीटमध्ये झापामा १, मोरङमा २ र उदयपुरमा १ सीट माओवादीले पाउने लगभग निश्चित छ ।
स्थानीय तहको मत परिणामका आधारमा एमालेभन्दा केही मतले मात्रै पछि परेको माओवादीले प्रदेश ६ मा आधा अर्थात ५० प्रतिशत सिट पाउने एमाले नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश नम्बर ६ का १२ सीटमध्ये माओवादीले सल्यान, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट र जुम्ला पाउने लगभग सहमति भइसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश नम्बर ७ मा प्रतिनिधिसभा १६ सीटमध्ये एमाले र माओवादीबीच कतिकति बाँड्ने भन्ने बारेमा कार्यदलमा छलफल भइसकेको छैन । माओवादीले कैलालीमा ५ मध्ये २ र कञ्चनपुरमा ३ मध्ये एक सिट पाउने अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।